Iindaba - Ezona zihlalo ziLungileyo zeOfisi yokuSebenza eKhaya (2021)
Izitulo ezilungileyo ze-Ofisi ye-Ergonomic yokuSebenza eKhaya (2021)
Ngoku, ngenxa yefuthe lobhubhane, ukusebenza ekhaya kuyaqhubeka kuyinto eqhelekileyo kwabaninzi, kwaye ngale ndlela sinokuphepha ukuxinanisa ibhasi kunye nomgaqo ongaphantsi komhlaba ngexesha lokubaleka, kwaye sinokongeza iyure yokulala eyongezelelweyo.
Ukusebenza ekhaya akuzizo zonke izibonelelo. Ukuba ucinga ukuba iyakwenza ukuba ungabandakanyeki kangako kwiintlanganiso kunye nexesha elingakumbi lekhefu, uyaphosisa.Inkampani iya kusebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zesoftware yevidiyo kwiinkomfa zevidiyo, unxibelelwano ngelizwi, kwaye yandisa iiyure zethu zokusebenza ngamanye amaxesha.
Ngokwahlukileyo koko, sinokusebenza ekhaya ixesha elide.
Xa uhleli kwisitulo seofisi yeplastiki phambi kwekhompyuter ngaphezulu kweeyure eziyi-8 ngosuku, unokuziva uqaqanjelwa ngumqolo kwaye usisihogo somzimba wakho. Ukunciphisa umngcipheko emzimbeni wakho, ii-pls zisebenzisa isihlalo esihle, se-ergonomic. Nazi izihlalo ezithandwayo ezingayi kukuphula umqolo.
Yeyiphi eyona nto ibalulekileyo ekukhetheni isitulo seofisi?
Esona sihlalo sihle seofisi sinokukugcina ukhululekile kwaye sigxile ixesha elide, ngaloo ndlela siphucula ukusebenza kakuhle komsebenzi.
Umqolo uhlala ulilungu lokuqala lomzimba ukubandezeleka imini yonke. Ke ngoko, khetha isitulo esine-backrest okanye i-lumbar support, ihlala ikwimo yokongezwa kwe-backrest.
Umqolo uhlala ulilungu lokuqala lomzimba ukubandezeleka ngokuhlala phantsi imini yonke. Ke jonga isitulo esinenkxaso yangemva okanye ye-lumbar, ehlala ihlala ikwimo yokuqinisa ngakumbi kwi-backrest.
Enye into ekufuneka uyiqaphele kukulungelelanisa. Esona sihlalo sihle seofisi ehlabathini asinantsingiselo ukuba siphezulu kakhulu okanye siphantsi kakhulu. Isihlalo kunye nokuthambeka kunokulungiswa.
Nazi ezinye esizicebisileyo:
I-ARICO- i-Red Dot Award 2021
1: Isitulo esijikeleze i-ofisi ephezulu,
2: I-sponge yomngundo yesihlalo kunye nasemva,
3: I-aluminium emisiweyo i-armrest,
4: IJamani "Bock" indlela yolawulo lwentambo, indawo ezi-3 zokutshixa, isihlalo esityibilikayo, umva kunye nesihlalo esiqhagamshela icandelo yialuminium,
I-5: Φ60MM PU caster, Imodeli yi-D65Y80 KGS yeklasi ye-4 yegesi
V ezimile Isakhelo sangasemva: Isakhelo esimiswe okwe-V esimile ngasemva kwesakhelo sangasemva sandisa ubude ukusuka esinqeni siye kumatshini ongezantsi, owawunzima iindawo zokubamba iingalo kunye nokutolika ukuma okunamandla kwe-aesthetics yejometri.
Indlela yeBhokisi:Iphuhliswe liqela le-Bock eJamani le-R & D, inkqubo yenkqubo isekwe kwinto evulekileyo kwaye elula yokukhanya. Ngaphandle kwendlela yokusebenza encinci, zonke izinto eziyimfuneko zangaphakathi zifihliwe ngaphakathi. Uluhlu lokuhlengahlengiswa koxinzelelo lunokufezekiswa nge-torque encinci kwi-ergonomical handwheel. Iwheelwheel yesandla ifuna ukuguqulwa kuphela nge-1.5 kumjikelo wokugqibezela uxinzelelo. Inkqubo ehambelanayo isekwe kwinkqubo yokunxibelelana kwe-axis eyi-4 ekhokelela kubunewunewu obuncitshisiweyo ekutsaleni ihempe.
Ukukhetha imibala: Imibala eyahlukeneyo efanayo iyadityaniswa kwaye idityaniswe ngentambo enye kunye nomsonto omnye, ukufaka amandla emibala emsulwa, ukudala isitayile esahlukileyo kunye nokuvula iindawo ezininzi zokuyila.